Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao momba ny fahasalamana » KISS frontman Gene Simmons: fahavalo ny anti-vaxxers!
Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Kolontsaina • Entertainment • Vaovao momba ny fahasalamana • Zon'olombelona • Vaovao • People • tompon'andraikitra • Safety • Tourism • Travel Wire News • malaza ankehitriny • Etazonia Vaovao Vaovao
Ny olona mandà ny fisian'ny COVID-19 ary vonona ny hanaparitaka ny viriosy dia ratsy, "fahavalo" izay tokony ho fantatra sy haseho.
'Ratsy' ny olona mampibaribary ny hafa amin'ny loza mety hitranga amin'ny COVID-10.
Tsy mahazo mitondra aretina amin'olona ianao satria heverinao fa manana zo mamitaka ianao.
Ny fanamarihan'i Simmons dia anisan'ny nivoaka farany avy amin'ny tobin'ny olo-malaza mitsambikina amin'ny vaksiny refuseniks.
Gene Simmons, mpitarika ny tarika rock malaza Kiss, nikapoka ireo anti-vaxxers izay am-pahatsorana mampibaribary ny olona hafa amin'ny mety hisian'ny otrikaretina COVID-19.
Ny olona mandà ny fisian'ny COVID-19 ary vonona ny hanaparitaka ny viriosy dia ratsy, hoy i Simmons, niantso ny anti-vaxxers ho "fahavalo" izay tokony ho fantatra sy haseho.
"Tsy mahazo mitondra olona amin'ny olona ianao satria heverinao fa manana zo mamitaka ianao," Kiss hoy ny frontman.
Nipoitra tao amin'ny 'TalkShopLive' ilay olana raha niresaka momba ny 'KISS Kruise' farany i Simmons ary ny fomba itakiana ireo mpankafy izay te handray anjara amin'ny iray amin'izao fotoana izao. vita vaksiny. Nambarany fa tsy misy hafa amin’ny fitsipika mitaky fehin-kibo na tsy mifoka sigara ao amin’ny tranobe izany.
Voadidy ny zavatra toy izany “fa tsy hoe te hanaisotra ny zonao izy ireo – izany dia satria mankahala izany ny ambiny. Tsy te hanitrika ny setrokao izahay,” hoy i Simmons.
“Tsy te ho voan'ny aretinao aho”, hoy ilay mpiala voly 72 taona. “Tsy te hanao vivery ny aiko aho satria te handalo jiro mena ianao.”
Nanoro hevitra ny olona izay mandà izy vaksiny dia tokony ho “fantarina sy havoaka an-kalalahana”.
“Fantaro hoe iza no namanao amin’ny halehiben’ny fiahiany anao. Anisan'izany ny COVID-19, ”hoy i Simmons. “Raha vonona ny hiaraka aminay tsy voavaksiny ianao, dia fahavalo ianao.”
Ny fanamarihan'i Simmons dia anisan'ny vao haingana avy amin'ny tobin'ny olo-malaza nilentika tamin'ny vaksiny refuseniks. Piers Morgan, mpampiantrano fahitalavitra britanika mibaribary, dia nanapoaka azy ireo tamin'ny zoma ho “vondrona tsy misy hazon-damosina” tsy mendrika ny razambeny mahery fo.
November 12, 2021 amin'ny 19: 43
Tsy anti-vaxxer aho. Na izany aza, heveriko fa diso toerana ny eritreritra Mr Simmons. Raha te hanao olona ho fahavalo ianao dia ny fahavalo dia ireo olona tsy misaina izay manao vaksiny nefa tsy nanao fikarohana ho an'ny tenany manokana ary manao izany satria nolazaina fa tokony. Ny Covid dia tena azo sorohina amin'ny fitazonana ny haavon'ny vitaminina D. Eo ny porofo ho an'izay te hitady izany. Hita ihany koa fa ambony noho ny tsy vita vaksiny ny antony rehetra mety maty. Ary farany dia tsy manome hery fiarovana anao ny vaksiny. Noho izany dia mety ho voan'ny aretina ianao ary manaparitaka izany amin'ny olon-kafa ary izany indrindra no mitranga.